The Art Garden Rohingya Interview (Burmese) "Benazir Salim (Zoe Blossom)" ဆိုသူ ကဗြာဆရာမ မဇငျမာဝငျး နှငျ့ The Art Garden Rohingya အငျတာဗြူး ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ၊ အောကျတိုဘာလ (၁၀) ရကျ။ The Art Garden Rohingya သညျ လူမှုအခွပွေု စာပအေနုပညာ website ဖွဈပါသညျ။ ကြှနျုပျတို့ The Art Garden ...
Sep 25, 2020 AGR Interview
[Unicode] The Art Garden Rohingya Interview "ရိုဟငျဂြာတှရေဲ့ ရငျတှငျးခံစားခကျြတှေ ကမ်ဘာသူကမ်ဘာသားသိနိုငျအောငျ၊ ရိုဟငျဂြာလူမှုအသိုငျးအဝိုငျး ပွုပွငျပွောငျးလဲမှု ဘကျကိုအာရုံစိုကျလာအောငျ ကဗြာရေးနတောပါ" ဆိုသူ လူငယျကဗြာဆရာ ငွိမျးခမျြးနဂမျြး (ရိုခရီးသညျ) နှငျ့ The Art Garden Rohingya အငျတာဗြူး ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ၊ စကျတငျဘာလ (၂၅) ရကျ။ The Art Garden Rohingya သညျ လူမှုအခွပွေု စာပအေနုပညာ website ဖွဈပါသညျ။ ကြှနျုပျတို့ ...
The Art Garden Rohingya Interview With the poet Mohammad Erfun Amin September 19, 2020 The Art Garden Rohingya is the first Rohingya community poetry and art platform. We publish poetry and other forms of artworks in ...
The Art Garden Rohingya Interview "လာလ်​​မော်​တီခါန်း" ဆိုသူ က​ဗျာဆရာ နှင့် The Art Garden Rohingya အင်​တာ​ဗျူး၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မေ​လ(၁၇)ရက်​ The Art Garden Rohingya သည်​ လူမှုအ​ခြေပြု စာ​ပေအနုပညာ website ဖြစ်​ပါသည်​။ ကျွနု​ပ်​တို့ The Art Garden Rohingya သည်​ ရိုဟင်​ဂျာတို့၏ စာ​ပေ၊ အနုပညာ၊ ရိုရားဓ​လေ့များကို ​ဖော်​​ဆောင်​​ပေးချင်​သည့်​ ...
May 02, 2020 AGR Our Voice
Two Voices, One Humanity Written By: Ro Anamul Hasan and Tom Arcaro Thoughts and feelings through chatting betweenaRohingya refugee humanitarian in Cox’s Bazar andahumanitarian sociologist living in North Carolina, ...
The Art Garden Rohingya Intervie "ရူကီယာ ဘငျ ဝလီအုလ်လာ" ဆိုသူ ကဗြာဆရာမ ရိုမရုနျးနှငျ့ The Art Garden Rohingya အငျတာဗြူး ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ၊ ဖေ ဖျေါဝါရီလ(၇)ရကျ The Art Garden Rohingya သညျ လူမှုအခွပွေု စာပအေနုပညာ website ဖွဈပါသညျ။ ကြှနျုပျတို့ The Art Garden Rohingya သညျ ရိုဟငျဂြာတို့၏ စာပေ၊ ...
2020 NEW YEAR MEET THESE ROHINGYA POETS Who hold pens between their fingers & Believe in peace through literature Ro Anamul HasanMohammed ReduwanThida ShaniaDialogue PartnerNyein Chan NajamRo MaroonRo Yassin AbdumonubParmin Fatima @ ...
"ယခု​ခေတ်​ ကျွန်​​တော်​တို့လို လူငယ်​​တွေရဲ့ တိတ်​ဆိတ်​​နေခြင်းက မျိုးဆက်​သစ်​​တွေကို သတ်​သလိုမျိုး မဖြစ်​​အောင်​က​ဗျာ​ရေးဖွဲ့တာပါလို့" ဆိုသူ က​ဗျာဆရာ ​အေနာမုလ်​ဟာ​ဆောင်းနှင့်​ The Art Garden Rohingya အင်​တာ​ဗျူး ၂၀၁၉ ခုနှစ်​၊ ​အောက်​တိုဘာလ ၂၇ ရက်​ | The Art Garden Rohingya သည်​ လူမှုအ​ခြေပြု စာ​ပေအနုပညာ website ဖြစ်​ပါသည်​။ ကျွနု​ပ်​တို့ The Art Garden ...
The Art Garden Rohingya Interview With the poet Ro Mehrooz October 10, 2019 The Art Garden Rohingya is the Rohingya community arts website. We foster the passion and talent of those ...